बेङ्लोरद्वारा हैदरावादसामु २१९ रनको विशाल लक्ष्य प्रस्तुत , जित कस्को ? |
बेङ्लोरद्वारा हैदरावादसामु २१९ रनको विशाल लक्ष्य प्रस्तुत , जित कस्को ?
२०७५, ३ जेष्ठ बिहीबार २२:०४ May 17, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) मा अहिले रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरले शनराईजर्स हैदरावाद जितको लागि २१९ रनको विशाल लक्ष्य खडा गरेको छ । खेलमा टस हारे ब्याटिङ गरेको बेङ्लोरले निर्धारित २० अोभरमा ६ विकेट गुमाउँदै २१८ रन बनायो ।
बेङ्लोरको लागि एबि डिभिलर्सले सर्वाधिक ७९ रन बनाए । ३९ बल खेलेका उनले १२ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । त्यस्तै मोइन अलिले ६५ तथा कोलिन डी ग्रैंडहोमले अाकामक ४० रन बनाए । बलिङतर्फ रसिद खानले ३ विकेट लिए। सिद्धार्थ कोलले २ तथा सन्दिप शर्माले १ विकेट लिए।
१२ खेलमा ९ जित सहित १८ अंक बटुल्दै हैदरावादले प्ले अफमा स्थानमा सुरक्षित गरिसकेको छ । उता बिराट कोहलीको बेङ्लोरको लागि भने यो खेल गर या मरको अवस्था रहेको छ ।
प्लेअफ पुग्न बैंगलोरको लागि यो खेल जित्नैपर्ने दबाब छ। अाज पराजित भए कोहलीको बैंगलोर अाईपिएलबाट बाहिरिनेछ। अहिलेसम्म बेङ्लोरले १२ खेलमा ७ हार तथा ५ जितबाट १० अंक सहित अंक तालिकाको सातौ स्थानमा रहेको छ । अाज जित हासिल गरे हैदरावादले दोस्रो स्थानमा रहेको चेन्नाईसँगको दुरी झनै फराकिलो बनाउने छ ।
रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर: विराट कोहली (कप्तान), पार्थिव पटेल (विकेटकीपर), मोईन अली, एबी डिविलियर्स, मंदीप सिंह, कॉलिन डि ग्रैंडहोम, सरफराज खान, टिम साउदी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज र युजवेंद्र चहल.